ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို စော်ကားကြသူများ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို စော်ကားကြသူများ…
ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို စော်ကားကြသူများ…
Posted by alinsett on Jul 24, 2012 in Creative Writing, Critic, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 40 comments
အလင္းဆက္တို ့ေတာ့...ခံလိုက္ရျပီ ။
လူူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကျင့်တရား..ကောင်းခြင်း ၊ ဆိုးခြင်း … အပေါ် မူတည် ၍ အကဲဖြတ်တတ်သော ကျွန်တော်…..။
ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်အောင် စောင့်ထိန်းနေပါလျက်နှင့် ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို ထိပါး..စော်ကားခံ ရသော အခါ..
အလွန်ပင် ခံရ ခက်လှပါသည် ။
ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို…. ( သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့် ) စော်ကားလိုက်သော..ဖြစ်ရပ်တစ်ခု…
မနေ့့က ဖြစ်ပျက်သွားပါသည် ။
( မနေ ့က ဘတ်စ် ကားပေါ် တွင် ကြုံတွေ ့လိုက်ရသော.. အဖြစ်သည်..ဤ စာသားများကို ချ မရေးဘဲ..မနေနိုင်လောက်အောင်..
ဘတ်စ် ကား ၏ ပြတင်းပေါက် ဘက် တွင် ထိုင်နေသော..ကျွန်တော့်ေဘး ( ဘယ် ဘက် ) တွင်..
တစ်စုံတစ်ယောက် လာထိုင်တော့မည်ကို သိသော်လည်း..ထို တစ်ယောက်ယောက် နှင့်ပက်သက်၍ ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာ ကို…
အထိပါး ခံရလိမ့်မည်..ဟု ကြို တင် မသိ ခဲ့ပါ ။
နှစ်ယောက် ထိုင်ရသော..ခုံတွင် ကျွန်တော့် ဘေး..တစ်နေရာစာ အလွတ် မှာ..အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဝင်ထိုင် ပါသည် ။
ထိုအမျိုးသမီး ၏ ဘေးမှာ..ရပ် ..လိုက်သော..ယောကျာ်းတစ်ယောက်သည်…. အဲဒီ အမျိုးသမီး၏ ရည်းစား…ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။
သူတို ့နှစ်ယောက် ၏ ပက်သက်မှုက ဘာပဲ..ဖြစ်နေနေ..ကျွန်တော် နှင့် မဆိုင်ပါ ။
ကျွန်တော်……. လက်ထဲမှာ…ကိုင်ထားသော..စာအုပ်ကို ဖတ် ဖို ့ပြင်လိုက် ပါသည် ။
ကျွန်တော့် မျက်မှန်က မှုန်ဝါးနေသောကြောင့်….ပုဝါ စ ဖြင့်..သုတ်လိုက်ပါသည် ။
ထို ့နောက် ..စာအုပ်ကို စတင် ဖတ် သည် ။
ကျွန်တော့် ကျေးဇူးရှင်..ဆရာ ဇော်ဇော်အောင်..ရေးသားပြုစုထားသော… ကျမ်းငယ် တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည် ။
ပို့စ်မော်ဒန် သီ အိုရီ အချို ့ကို..ရှင်းလင်း ထားသော…စာပေ အနုပညာဆိုင်ရာ…စာအုပ်..။
ကျွန်တော့်ဘေးမှ ..အမျိုးသမီးကို…. သူ ့ရည်းစား..( ကောင်လေးက ) မတ်တပ် ရပ်လျက်သားမှနေ၍…
ဖက်ရုံ တင်မက… ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်လက်မောင်း နှင့် ထိ ကပ်နေရသော…အမျိုးသမီး ၏ လက်မောင်းသား..ကိုပါ..သူ ့ဘက်ရောက်အောင်..
( ကျွန်တော် နှင့် မ ထိအောင် ပေါ့လေ…) .တင်းတင်း… ဆွဲကပ်နေသည်..။
သိသိသာသာ ပင်..အကဲပါပါ..ဖြစ်လာသောကြောင့် အံ့ဩ ရပါသည် ။
၍ အမျိုးသမီး..အပေါ်…တပ်မက် ၍…. သဝန်တိုသော…စိတ် သည်..ဘေးမှာ.ကပ်လျက် .ထိုင်နေရသော…ကျွန်တော့် သိက္ခာကို
သူ ့ရည်းစား ၏ အသားကို..ကျွန်တော် နှင့် ထိနေမှာ..စိုးတယ်..ပေါ့လေ..။
သူ ့ရည်းစား ၏ အသား ကို သူ မှ လွဲ ၍ အခြား မည်သူ ့ကို မျှ မထိတွေ ့စေလိုဘူး..ပေါ့လေ…။
ဒါဖြင့်…. ဘေးမှာ ကပ်လျက် ထိုင်နေရသော… ကျွန်တော်ကရော……
ထိချင် လွန်းသည့် ပုံ….. ဖြစ်နေလို့လား….။
ကျွန်တော့် အမူအရာက…မိန်းမ တစ်ယောက် ၏ အသား ကို ဘေးချင်း ကပ်…ထိတွေ့နေရ ခြင်းမှာ..
သာယာ မက်မောတတ် သော…လူတစ်ယောက် ပုံ..ပေါက်နေလို ့လား… ။
သူ ့ရည်းစားကို သဝန်တိုသော….ကြောင့်….
ကျွန်တော့် နှင့် မ ထိစေချင်…၊ ထို ့ကြောင့်… မထိရအောင်…ဆွဲ ခွါ..ထားလိုက်ခြင်းသည်… ကျွန်တော့် ကိုယ် ကျင့် သိက္ခာကို… သွယ်ဝိုက်၍
စော်ကားလိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
လူသူ ကွယ်ရာ အရပ်မှာ ပင်…စိတ်မ ကူးပါ ။ သူ ့ရည်းစား..ဆိုသော..အသိ တစ်ခု ဖြင့်ပင်..ထိုမိန်းမ ကို ကျွန်တော်..စိတ်မကုူးပါ ။
သာယာစရာ..ကိစ္စ မဟုတ်တာကို… ကျျွွန်တော့် အသိ ဉာဏ်က…တိတိကျကျ သိနေပါသည် ။
ကျွန်တော်သည်..မြန်မာ ယောကျာ်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည် ။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ယောကျာ်းတစ်ယောက် စောင့်ထိန်းအပ်သော..ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို… တတ်နိုင်သမျှ စောင့်ထိန်းပါသည် ။
ထိုင် ခုံက ထ..ပေးလိုက်ရမလား….။
ကျွန်တော် နှင့် အသားခြင်း ..ထိ မှာကို တော့ သူက စိုးရိမ်နေပြီ။
ကျွန်တော့်မှာ.. ဤ ထိုင်ခုံမှာ..ထိုင်စီး ဖို ့…. အခွင့် ရှိပါသည် ။
ထိုင်ခံ ုမှာ..ထိုင်၍ စာအုပ် ဖတ်ကာ…..စီးနင်း လိုက်ပါ ခွင့် ရှိပါသည် ။ ဒါ..ကျွန်တော့် အခွင့် အရေးပဲ..ဖြစ်သည် ။
ဤ အခွင့်အရေးကို… အသုံးချ ပိုင်မှု အရ….
ကျွန်တော့်မှာ…အပြစ် မရှိပါ ။
သူ ့ရည်းစားကို…အသားချင်း….ထိ ကပ် ချင် စိတ်… ( တပ်မက်စိတ် ) …… မရှိသောကြောင့်…ကျွန်တော့်မှာ….
လုံး ဝ….အပြစ် မရှိပါ ။ ဒါဖြင့်…တရား လွန်တာ..ဘယ်သူလဲ…။
ရည်းစားဖြစ် သူကို….အဲဒီလောက် သဝန်တိုနေလျှင်….
လူကြပ်ကြပ် ဘတ်စ်ကားပေါ်..ခေါ် မလာသင့်တာ….. သူ မသိဘူးလား…
ဘတ်စ်ကားလို နေရာမျိုးသည်…. စိတ်ထဲက ထိချင်သည် ဖြစ်စေ..။ မထိ ချင်သည် ြုဖစ်စေ…လူတိုင်း..အသားချင်း ထိ ကပ်ပြီး..
စီးနင်းလိုက် ပါ မှ ဖြစ်မှာကို… သူူ… မသိဘူးလား…
သူ ့ရည်းစားကို.. တွန် ့တို..သဝန်တို..စိတ်ကြောင့်…ပြု မူလိုက်သည့် အပြု အမူက…
ဘေးမှာ..ထိုင်…နေရသော.. ကျွန်တော့် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို …မယုံသင်္ကာဖြင့် ထိပါး..စော်ကား သလို ဖြစ်သွားတာကို…
သူ..အဲဒီ မိန်းမကို… ချစ်သော အချစ်…ကြောင့်..တပ်မက် မှု ပေါ်မှာ. မူတည် ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော…. ဝန်တို စိတ် ပေါ့လေ…။
အတွေ့ အထိပေါ်မှာ..အခြေခံ ၍ ချစ်သော… အချစ် ဟု…ကျွန်တော် ထင်ပါသည် ။
( သူ့စိတ်ဖြင့်…လုူူတိုင်းကို နှိုင်းပြီး..) အသား ချင်း… ထိခြင်းး၊ မထိခြင်း ကို….အရေးတယူ ခံစားချက် ပြင်းထန်နေသော..
သူ့လို အချစ်မျိုးကို…. ကျွန်တော်… အထင်မကြီး ပါ ။
ကျွန်တော်… ဖတ်မြဲ ဖြစ်သော..စာအုပ် ထဲကိုသာ..စိတ်ကို နှစ် ၍…… လိုက်ပါ လာပါသည် ။
ကျွန်တော် ဆင်း ရ မည့် မှတ်တိုင်ရောက်ပြီ…။
နေရာမှ…ထ လိုက်ပါသည် ။
ကျွန်တော် ထ လိုက်သောကြောင့် လွတ်သွားသော..နေရာမှာ… သူ..ဝင်ထိုင်မှာပေါ့လေ…။
သူ ့ဘေး ကို…အဖွားအိုတစ်ယောက်….လာ ရပ် ပါတော့သည် ။
သူ …မထိုင်ပဲ… အဖွားအိုကို… ထိုင်ဖို ့…ဦးစားပေးမယ်..ထင်ပါရဲ ့…ဟု..
သူ ့မှာ…ရည်းစား အတွက်..တပါးသူကို…. မသင်္ကာ စိတ်တွေ..ဖြစ်ရ..၊
သဝန်တို စွာ… ပူလောင်…ရပေမယ့်…. အဖွားအိုတစ်ယောက်ကို…..ဦးစားပေးဖို ့တော့…သိ နိုင် ကောင်းပါရဲ ့….လို ့………
(သို ့သော်…. မထင်မှတ်ပဲ..) ..ကျွန်တော်..ထ လိုက် ၍ လွတ်သွားသော…. နေရာမှာ..သူ ဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။
ထိုင်ပြိးသည်..နှင့်………………. သူ ့ရည်းစားကို….တင်းတင်း..ဖက်ပွေ ့ထားလိုက်သည် ။
အဖွားအို ကို နေရာ….. ဦစားပေးဖို ့ထက်………..
သူ ့ရည်းစားကို… ဖက်ထားခွင့် ရဖို ့က…. ပို အရေးကြီးပုံ..ရသည် ။
စိတ်ထဲမှ… သူ ့ကို…. တဏှာ ရူး….ဟု…ခေါ်လိုက် မိသည်။
တဏှာ ရူး ခွင့် သူ ့မှာ..ရှိကြောင်း…
သူ့စိတ်နှလုံး နဲ ့သူ…တဏှာ ရူးတာ…ဟာ..သူ ့အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင့်း….
သူ ့အခွင့်အရေးနဲ ့သူ..တဏှာ ရူးတာကို…. ကျွန်တော်တို ့..ဘေးလူများက..ဘာမျှ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်..ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း…..များ….တွေး….ကာ….
ကားပေ ါ်မှ ဆင်းလာခဲ့ရပါ သည် ။
( သူ့အခွင့်အရေး က..ဘေးလူ ၏ အခွင့်အရေးကိုတော့…သွယ်ဝိုက်ပြီး… ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့ပြီ… )
ကျွန်တော်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲတွင်….ကျွန်တော်တို ့စောင့်ထိန်းသော…
ကိုယ်ကျင့် တရား ..နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို…. လာရောက် ..ထိပါးစော်ကား တတ်သော..
ထိုလှိုင်းများ ၏ တိုက်ခိုက်မှု မှ….. အလွယ်တကူ…ရှောင်လွဲ..ရုန်းထွက် ၍ မရဘဲ………….
ခေါင်းငုံ့ခံ လိုက်ရခြင်း….
မကျေမနပ် ဒေါသ ထွက်…လိုက်ရခြင်း…တို ့မှ တပါး…………………………………………………..
24 .7.2012 .
““မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ယောကျာ်းတစ်ယောက် စောင့်ထိန်းအပ်သော..ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို…
တတ်နိုင်သမျှ စောင့်ထိန်းပါသည် ။””
အကိုစိတ်နေစိတ်ထားမွန်မြတ်နေတာကို ကျနော်တို ့သိမှတ်ပြုပါ၏။အဲ့လောက်သဝန်တို အောက်တန်း
ကျတကိုယ်ကောက်းဆန်တဲ့ အဲ့ငနဲကတော့ဗျာ နှာဘူးကျချက်က သူနဲ ့နှိုင်းနေတယ်ဗျနော့။
ဟေ့…. ဘယ်ကကောင်လဲကွ.. ငါ့မိတ်ဆွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို စော်ကာတာ…ဟေ…
အဲဒီကောင် ဘယ်ရောက်သွားလဲ…. ဘယ်ခွေးမှ လူထင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွ…
မြန်မာပြည်က ကားတွေက အဲဒီလိုပဲ အမြဲတမ်းလိုလို ကျပ်တယ်ဗျ။ အဲဒါက အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်လာတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီငနဲကတော့ နည်းနည်း ပိုတာဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ အဲဒီလို ကောင်မျိုးက ရပြီးရင် လှည့်တောင် ကြည့်ပါ့မလား မသိဘူး။
အသိတရားနဲ့ မရှက်မကြောက် အခွင့်အရေးကို ရယူတတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို
ပြီးတော့လည်း အနာခံမှုနဲ့ အသာစံမှု ကိုလည်း တွေးလိုက်မိသေးရဲ့ ..
ဖတ်ကြည့်ပြီး အလင်းဆက်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
လူငယ်တွေဆိုတော့ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးကို သူက ဂရုစိုက်ကြောင်း ပြသလိုတဲ့စိတ်၊
သူ့ကို အားကိုးစေလိုတဲ့စိတ်တွေ များနေလေတော့ ဘေးလူကို ထည့်မစဉ်းစားမိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုရေးလိုက်တော့ တခါတလေမှာ ကိုယ်အမှတ်တမဲ့ပြုလိုက်တာလေးက ဘေးလူကို သူတပါးကို စော်ကားသလို ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကို သင်ခန်းစာယူနိုင်ကြတာပေ့ါ။
ဖက်နမ်းခဲ့လိုက်တာတော့ ဟုတ်ဘူး ကိုယ့်လူရယ်
ကားပေါ်မှာ ပါးစပ်ဆိုင်းတီးပြီး ကွေးနေအောင် ကပြီး
ဘတ်စ်ကားပုံစံကြည့်ရတာ မန ္တလေးမှာလားလို့။
သူတို့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံမျိုး မျက်နှာတင်းမထားလိုက်ခဲ့ဘူးလား။
လူကြားထဲ ပုံစံမကျတာတွေ လုပ်နေကတည်းက စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျသူတွေ
လမ်းမှာတွေ့တဲ့ အမှိုက်ကို အိမ်ထိမသယ်လာပါနဲ့လား။
ဒီတိုင်းဆို သူက သဝန်တိုတာမဟုတ်လောက်ဘူး။အလင်းဆက်ကို (ဘေးက ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရှိတာကို) အကြောင်းပြပြီး
သူ့မိန်းကလေးပေါ်မှာ အသာယူချင်နေတဲ့ လူပါကွာ။
ဒီလို လူအတွက် စိတ်မထိခိုက်ချင်ပါနဲ့။မတန်ပါဘူး။
ငယ်တဲ့လူတွေ(၂၅အောက်၊ ၂ဝ ဝန်းကျင်)မှာတော့ အများဆုံးအဲ့လိုပုံမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့
(မဟုတ်ရင်လည်း) ယုံကြည်မှု၊ နားလည်မှုတွေနည်းရင်လည်း ဖြစ်တတ်မယ်ထင်ရဲ့
အဓိကက ကိုယ့်စိတ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိနေတာပဲ
ထင်ချင်သလိုထင်ပါစေ (အဲ့လိုလူမျိုးကထင်တာတော့ ဂရုစိုက်စရာမလို)
ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုး တွေ က ဟိုအရင် အရီးတို့ တုန်းက ဘတ်စကား စီး စဉ် ကလဲရှိပါ့တော်။
ကောင်လေး တွေ က သူတို့ ကောင်းမလေးနား တစ်ခြား ကောင်လေး ကပ်ရင် ရန်လို တယ်။
ကောင်မလေး တွေ ကလဲ သူတို့ ကောင်လေး နား မှာ ရပ်မိ တဲ့ ကောင်မလေး တွေ ကို မျက်စောင်းထိုးတယ်။
သဘောကတော့ ခေတ် ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ကိုယ့် သဝန်တို စိတ် က သူများကို သံသယ အမုန်း နဲ့ ကြည့်မိတာ ခြင်း တွေ က တူနေဆဲ။
စိတ်ထဲ ဘာမှ မထား ပါနဲ့ကွယ်။ ကိုယ့် အတွက် ၂ခါနာပါတယ်။
သူများ က သူ့ ကို အဲဒီလို ပုံစံ နဲ့ ဆက်ဆံလာခဲ့ရင် ကိုယ်က သူများကိုလဲ ဒါမျိုး မလုပ်သင့်ကြောင်း အဲဒီကောင်လေး သိသွားပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာလူငယ်တွေဟာ.. တခြားနိုင်ငံသားတွေထက်.. ပိုပြီးရန်ဖြစ်လွယ်.. ထိလွယ်ရှလွယ်တယ်လို့.. သတိထားမိတယ်..
စတိတ်ရှိုးတွေ.. သင်္ကြန်.. ပွဲတော်တွေမှာ.. ရန်ဖြစ်ကြတာလည်း.. ခဏခဏကြားရတယ်..။
“ဘာကြည့်တာလည်းကွ”ဆိုပြီး.. ထသတ်တာမျိုးလည်း.. ကြားဖူးတာပဲ..
ရှေးဂျပန်ခေတ်မှာ.. ဂျပန်တွေ ဆာမူရိုင်းတွေ.. အရပ်သားတွေ.. လူအချင်းချင်း.. အဆင်မပြေရင်.. စိန်ခေါ်ပြီး ဓါးနဲ့ယှဉ်ခုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့..။ လမ်းလျှောက်ရင်.. ဓါးအိမ်ချင်းခတ်မိ..ထိမိရင်လည်း.. စိန်ခေါ်ယှဉ်ခုတ်တာပဲ..။ ရှုံးရင်.. သေပေါ့လေ..
ဒီလိုနဲ့.. ဒီခေတ်မှာ.. လူအချင်းချင်း.. ထိခိုက်မလိုဖြစ်ရင်တောင်.. အပြန်အလှန်”Sumimasen （すみません）”လုပ်.. တောင်းပန်နေကြတဲ့.. ဂျပန်တွေမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်..
ကောင်းဘွိုင်ခောတ်.. သေနတ်.. လက်နက်တွေကိုယ်စီနဲ့.. ထစ်ဆို.. စိန်ခေါ်.. သေနတ်ချင်း..ယှဉ်ပစ်တာပဲ..
ဒီလိုနဲ့.. ဒီခေတ်မှာ.. အခုလို.. အပြန်အလှန်ရှိန်ပြီး.. တဖက်သားဘလိုင်း… မစော်ကားရဲတဲ့.. အမေရိကန်တွေကို.. မြင်ကြရတာပါ…။
စနစ်ကြောင့်လား.. လူကြောင့်လား… ယုံကြည်ရာ.. ဓလေ့ထုံးစံကြောင့်လား…
တဂျီးပြောတဲ့ ကျိန်စာကြောင့် ဟိ
ဒီကလေးမက ဒီ စကားလုံးကို တော်တော် ခံတွင်းတွေ့နေတယ်ထင်ပါ့….။ အော်… ကျိန်စာ ကျိန်စာ သူကြီးကလည်း စကားလုံးရွေးတတ်ပါပေ့…။
စာအရေးကောင်းတဲ့လူများကျတော့လည်း… အသားလေးထိမိတာကို အစပြုပြီး စည်ကာပတ်ကုံး ရေးတတ်ပါပေရဲ့.. တကယ်တမ်းကျတော့ ကျနော်တို့တွေဟာ အချိန်တော်တော်များမှာ ဒီလိုပဲ အစော်ကားခံနေရတာပါ.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သူတပါးကို စော်ကားမိဖူးမှာပါ.. အလင်းဆက်ရဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို နှလုံးသွင်းပြီးသကာလ နောင်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို ဆင်ခြင်ပါတော့မယ်လို့…
ဒီနေရာမှာ ကိုအလင်းဆက်နေရာမှာ ကျွန်မတာဆိုလဲ
ဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာပါပဲ သူ့စိတ်နဲ့ နှိုင်း တစ်ဂုဏ်းထဲထားနေတာ
ဟုတ်ပါ့.. ဒီလောက် အသားထိမှာ ကြောက်နေရင် တက္ကစီ နဲ့ တင်ခေါ်သွားပါလား… အဲဒါ သူလည်း တစ်ခြားကောင်မလေးတွေကို အဲဒီလိုစိတ်ရှိလို့ ဖြစ်နေတာ…
ကိုအလင်းဆက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားအပေါ် ထိန်းသိမ်းတဲ့စိတ်ကို လေးစားပါတယ်…
တခြားတပါးသော အကျင့်သိက္ခာကို ထိပါးခံရမှုတွေ..
ဖြစ်တတ်တဲ့ လူ့သဘောတွေကို ခံစားမိပါတယ်..
သူများ အညှိအဟောက် ကိုယ် ယူသိမ်းမိရင် ကိုယ်ပါ နံ ကုန်မှာပေါ့..
ကားပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ ဒါမျိုးကို မေ့ပစ်လိုက်သင့်တယ်။
သူ က သူ
ကိုယ် က ကိုယ်
ဖြစ်တဲ့ အတွက် မတူညီမှုတွေ ရှိနိုင်တာမို့ အာရုံထဲ ထားပြီး စိတ်တို မိတာကိုက ကြည်ကြည်လင်လင် ဖြစ်မဲ့ စိတ်တွေရဲ့ အချိန်တွေ အများကြီး အလကား ကုန်ဆုံး စေသလို ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကောင်ကို ချုပ်တီးထိုးနှက် ပိတ်ကန်ပစ်ကွာ။ အေဗေး.. သူများသမီးပျိုဂလေးကို ပိုင်ဆိုးပိုင်နင်း ရည်းစားသနာ လုပ်ရတယ်လို့။ မင်းတို့ အထဲမှာနေပီး မိုးမမြင်လေမမြင် ပျော်မြူးနေဂျတော့ ငါတို့လို အဝေးရောက်နေသူတွေဂ သဂျီးကင်စားဖို့ နွားတွေလားကွ။
အဲသလို ငတ တွေ ကျုပ်လဲ တွေ ့ဖူးတယ် ။
တဏှာရူးတော့ မဟုတ်ဘူး ။
ပညာက မတတ် အရည်အချင်းက မရှိ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု နဲ တဲ့
လူတွေပေါ့ ။ နောက်ပြီး မိန်းကလေး ဆီက လိုချင်တာ ရပြီးရင်
ကြော်ခွသွားတတ်တာ အဲသလို ကောင်တွေက ပိုများတယ် ။
လောလောဆယ်တော့ လိုချင်တာ မရသေးခင်မှာတော့
ကာကွယ်ပေးသူကြီး တစ်ယောက်လို သူရဲကောင်းကြီးလို ပုံဖမ်းပြီး
ကောင်မလေး ဆီက အမှတ်ယူနေတဲ့ ငကြောင်တွေပါ ။
ကျုပ်ကတော့ အဲသဟာမျိုး ဆိုရင် ကောင်မလေးကို မရရအောင်ချိတ်တယ်
သူများ ရည်းစား လိုက်ချိတ်ကောင်းလို့ …. ကွဲထားတဲ့ နှဖူးက ဒဏ်ရာလေးတောင် မပျောက်သေးဘူး …. ဗီဇက ပေါ်လာပြန်ပြီနော် …. အဟိ .. ။
အဲဒီကောင်က ဆယ်ပြားလိုနေတာဟေ ့
ကျုပ်လဲငယ်ငယ်ကဆို ကိုရင်နိဂိမိလိုဘဲ အရွဲ ့တိုက်မိမလားမဆိုနိုင်ဘူး
ခုတော့့့့။
နတ် ကလေး says:
အလင်းဆက်တင်ပြရေးသား ထားတာ ဖတ်ရတော့ ခံစား တွေးခေါ်မှုရသကို ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့်အနုပညာရသစာပေတစ်ခုဖန်တည်းမှုလို ့မြင်ပါတယ်။ဆရာ ကြီးဇော်ဇော်အောင် ရဲ့စာတွေကို ခုံမင်ကြိုက် နှစ်သက်တာကိုတွေ ့ရလို ့လည်း အလင်းဆက်ကို ကဗျာသမား စာသမား လို ့ဆိုချင်တယ်။ ကောင်း ပါတယ် ဆက်ရေးပါဦးလို ့
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဒီကောင့်မှာ ရှားရှားပါးပါး ဒီတစ်ယောက်ပဲရဘူးလို့ဖြစ်ရမယ်။ နောက်လဲ သူ့အရည်အချင်းနဲ့ ရှာလို့မရနိုင်တော့ဘူး ဒါကြောင့် သူများကိုသဝန်လိုက်တိုနေတာ :-)
ကျွန်တော်ဆိုမှာထားတယ် မင်းဘေးနားကခုန် လွတ်ရင်ငါ့ကိုအတင်းကြီးခေါ်မထိုင်ခိုင်းနဲ့… အနီးဆုံး တစ်ယောက် ထိုင်ပစေ့လေလို့ (သူငယ်ချင်းကိုပြောတာပါဗျာ) :-)
i think this is your issues, not that couple, and i have really no ideas why you got mad on suchasituation. That very normal to protect his g.f, and it’s not your business either.
ဘေးကကောင်က သူ့ကောင်မလေးကို အဲ့လို
ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတဲ့ အကြည့် မော့ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့
စိတ်ထဲမှ… သူ ့ကို…. တဏှာ ရူး….ဟု…ခေါ်လိုက် မိသည်။ ကိုအလင်းဆက်ရေ နောက်ဆိုစိတ်ထဲကမခေါ်နဲ့ ပါးစပ်ကဖွင့်ပြောလိုက်ပေါ့နော် ပြီးရင်တခါထဲပြေးတော့ (အဟီးးးးးးးး) စာဖတ်ပြီးကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်
အလင်းဆက်ရေ ….ကျွန်မလည်း အဲ့ဒါမျိုး ကြုံဖူးပါတယ် …. ။ ပိုဆိုးတာက …. မိန်းမငကြောင်က သူ့အကောင်ကို သဝန်တိုတာပါပဲ … ။ စိတ်ထဲ တဖျင်းဖျင်းနဲ့ ခံရခက်လိုက်တဲ့အဖြစ် ၊ နှုတ်ကလည်း ပြောထွက်လို့ မဖြစ်တာကြောင့် …. အတော်ဆိုးဝါးတဲ့ ခံစားမှုမျိုးဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် … ။ အခုနေ ပြန်စဉ်းစားလျှင်တောင် ဒေါသစိတ်က ရှိတုန်းပဲ … ။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ကျွန်မထင်တာတော့ .. ဟိုငကြောင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းလို့ပဲ ဖြစ်ရမယ် … ။ ဒါကြောင့် သဝန်လိုက်တိုနေတာ … ။သူ့ချစ်သူအပေါ်လည်း .. မယုံသင်္ကာစိတ်သိပ်များလို့ဖြစ်မယ် … ကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင် အသားချင်းထိနေတာ … ဘာများ ကျူးလွန်နိုင်မို့လဲ ……. ။ ကိုယ့်သိက္ခာကို ထိပါးတယ်ဆိုတာထက် …သူ့ခေါင်းထဲက အတွေး ဘယ်လောက်နိမ့်ကျတယ်ဆိုတာကို …. ပြသတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါ …. ။
အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ရွဲ့ပြီး ကိုယ်လုံးကြီးပါ စောင်းမှီပလိုက်ရမှာ ..
အလင်းဆက်ရဲ့ … မိမိရဲ့အတွေးသဏ္ဍန်ကို ပေါ်အောင်ရေးနိုင်တဲ့အရည်အချင်းကိုချီးကျူးမိပါတယ်…။
အလင်းဆက်ပြောသလိုပဲ …အဲဒီကောင်လေးကို တဏှာရူးလို့ထင်မိပါတယ်… အလင်းဆက်ရေးထားတာလေး
ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ပြုံးမိပါတယ် …. ဒီလိုပဲ …ကားပေါ်မရှောင် ၊ လူမြင်ကွင်းမရှောင် ဖက်ပြီးသွားလာနေကြတာတွေ
မျက်စိရှက်စရာပါ… အခုခောတ်ကြီးကိုက အနှစ်မရှိတဲ့ ရေပေါ်ဆီတွေလိုပဲ စိတ်ဓါတ်တွေလည်း ပျက်ယွင်းနေ ကြပါပြီ… သည်းခံလိုက်ပါကွယ်။
တို့အစ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို သဘောကျသွားပြီ တကယ့်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ ကားစီးတာဘဲ တော်ပါပေတယ်။။
အဲ့နှာဘူးကောင်ကတော့ တနေ့သူလည်းဝဋ်လည်မယ် အဲ့နှာဘူးကောင်က လူကောင်းနဲ့တွေ့လို့ အဲ့လိုသဝန်တိုနေတာ သူလိုမျိုး နှာဘူးနှာဘူး ကောင်ခြင်းတွေ့မှ သူကောင်မလေးကိုသဝန်မတိုတော့မှာ ။။
အဲ………… တားတား… ရဲ ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး… ဘယ်လိုတွေ..မန့်ကြမလဲ..ဆိုတာ..စိုးရိမ်နေတာ ။
ဘာလို့လဲ..ဆိုတော့ တားတားက…. ခံစားချက်ကို အဆ… များစွာ…ချဲ ့ကား..ကြည့်ပြီး..ခံစား..ရေးဖွဲ ့လိုက်တာကိုး..။
အဟိ ။ အခုတော့..တားတား ဘက်က … ကိုယ်ချင်းစာ.. ခံစားပေးကြလို ့..အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ ။
ကျွန်တော့်ရဲ ချစ်သော..စာ ချစ်သူ များ.
.( ရွာသူ ရွာသား..ညီ ၊ ကို ၊ မောင် နှမ များ.).အားလုံးလိုလို…လာဖတ်ကြ..၊ ခံစားလိုက်ကြတော့..
ပျော် လိုက်တာ ။
ဒီတော့ တစ်ယောက် ချင်းစီကို… ကျေးဇူးပါ…လို ့ပြောတယ်..မှတ်ပေးပါနော် ။
hi…. ko min lwin…
yes , this is my issues,
This problem is very easy for you .
But this is really difficult…. for me .
Because …. this is my own experience .
Thank ….. for your comment .
အဲ… တတ်လည်း..မတတ်ပဲ.နဲ့ပြောမိပြန်ပြီ။
အင်္ဂလိပ်စကားကို..ကြောက်ပေမယ့်… ပြော ကြည့်တာပါ ။ အဟိ ။
တီတီနု ရေ.. ဘတ်စ်ကားက မန္တလေး..က … ပုံ..ဖြစ်နေတာလား။ ကျွန်တော်လည်း..မသိပါဘူး။
အင်တာနက်ပေါ်က ပဲ..ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပုံ.. ဆွဲ ယူလိုက်တာပါ ။ တားတားကတော့..ရန်ကုန်မှာပါ.ဂျ။ ။အဟိ ။
သူကြီး..မှ စ၍……………….. မန် ့ကြသူများ..ထဲတွင် …
အရေးအသားကောင်းတယ်..လို့ပြောကြသူတွေ..ကိုရော…
ကျွန်တော့် အရေးအသားကို..ခံစားချက် မိမိရရ..ခံစားသွားသူတွေကိုရော..
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်..နော် ။
ကျွန်တော်က…. အဲဒီ အဖြစ်ကို… တကယ် ကြုံ.ရတဲ့အချိန်ကတော့….
ဘယ်သူ့့ကို ဒေါသ ထွက်ရ မှန်းမသိ..ပေမယ့်..
စာတစ်ပုဒ် ချရေးဖြစ်လောက်အောင်…. တွန်းအားပေးခဲ့တဲ ့..
အဖြစ်အပျက် တစ်ခု..ရှိခဲ့တယ်..ဆိုတဲ ့အနေအထားမှာပဲ .ထားခဲ့လိုက်ပါပြီ။
စာရေး ချင်သူ..ဆိုတာကလည်း… ဘာလေးပဲ ကြုံ.ကြုံ… ရေးမယ်..တကဲ.ကဲ…လေ. ။
သီးခံပြီး… ဖတ်ရှု..ခံစားပေးကြပါ…ချစ်စွာသော..စာချစ်သူ…မိတ်ဆွေတို ့ရယ်…နော် ။